Manje kunzima sokungabaza ukuthi izingubo beekeeper kubaluleke kakhulu. Kukhona anhlobonhlobo imikhiqizo, ofanele izici ngabanye lomuntu ngamunye. Kufanele kuqashelwe ukuthi beekeeper ngamunye uyakwazi bazikhethele ngubo ehloniphekile. Empeleni imvunulo beekeeper siqukethe ibhantshi, buso kanye amagilavu.
Izinzuzo main yokuba umvikeli izingxenye tibalwe lapha ngentasi. Kodwa ekuqaleni kubalulekile ukuqala suit.
Izikhwepha High, uyakwazi ukumelana ekuhlaseleni ngisho izinambuzane ezinodlame kakhulu.
Ngokuvamile izisebenzi ukuba zisebenze ezimweni ezimbi sezulu, okusho ukuthi amasudi beekeeper afakwa okusezingeni eliphezulu amanzi-oxosha izakhiwo, izinga esitebeleni okungadingi zinyamalale ngeminyaka.
I ephansi ungqimba Indwangu amasudi has umthamo omkhulu futhi kwenza isikhumba ukuphefumula ngokukhululekile isisebenzi.
Ovaloli avikelekile emiphumeleni umlilo Sparks. Impahla ndaba ebalulekile, ngoba ezikhathini eziningi, abafuyi bezinyosi sisebenze intuthu, sebenzisa ngendlela exakile.
izingubo ezivikelayo is adalwe kusuka ucezu olulodwa okuqinile lendwangu ngaphandle izingxenye ngabanye. Iphethini beekeeper suit kuhilela ukusetshenziswa kwezinto eziphinde zisebenziseke lwezinga eliphakeme kakhulu. Njengomthetho, lisetshenziswe ukukhiqizwa nelineni indwangu ekhethekile, edume ukubizwa ngokuthi ezimbili zangaphandle. Uziphu ukuze kube lula sise phambi. Kulesi suit senziwa ngqo imaskhi oyisivikelo yegridi, kodwa ababukeka iphethini ancike kuphela model yayo.
Ukuze abasebenzi kudingekile ukuqinisekisa Ukuthokomala kufanelekile isembatho emzimbeni, ngakho-ke, wasebenzisa ngesikhathi lokuthunga iraba emikhonweni cuffs kanye umugqa okhalweni. Kuyinto sibonga lesi sici inikeza isivikelo ngokumelene ingress izinyosi ngaphansi izingubo.
I jacket ngokungangabazeki Ukuvikelwa high. Kuvikela somzimba futhi kuvimbela ukulunywa yizinambuzane. Empeleni umsebenzi abafuyi bezinyosi kwenziwe ehlobo emini, lapho izinga lokushisa ngaphandle kuphezulu. Ngakho-ke beekeeper amasudi eyenziwe ukukhanya izindwangu anemibala. Ngokuvamile ithungwe kusukela Calico. Lokhu kwaziswa engasindi, ngakho-ke, umsebenzi kuwo kuyashesha, ilula futhi kulula.
Okuphoqelekile ngemfanelo isethi buso ekhethekile ebusweni. Ngokuvamile-ke Yenziwe chintz evamile. Ngokuvamile, phambi imaskhi sheathe black impahla, ukuze ngaphandle kufana umgubuzelo.
Nakuba besebenza kanzima ukubheka ngokusebenzisa ukotini oluhlaza noma amhlophe. Noma kunjalo esetshenziswa Indwangu emnyama. zokubhukuda beekeeper aqukethe umgubuzelo namaseli ezinkulu, amaseli ezincane kusukela zidinga eyestrain njalo. Nokho, kwabanye zokubhukuda ukulungiswa kungenzeka ukufaka isikwele metal noma round ukuphepha net.
Namuhla, kunamabandla amaningi ukuthenga suit beekeeper. Moscow inikeza ezihlukahlukene, ezisukela Izitolo okudayisa ziphethe e-pads, ngalinye elikwazi unikeza anhlobonhlobo, lapho umuntu uzokwazi bazikhethele option ezifanele kakhulu.
Ukhula "Fyuzilad Forte": yokusetshenziswa, izici